Samsung Gear S2 emelitere na ụfọdụ atụmatụ nke Gear S3 | Akụkọ akụrụngwa
Samsung Gear S2 emelitere na ụfọdụ atụmatụ nke Gear S3
O yiri ka ụmụ okorobịa ndị nọ na Samsung chọrọ ime ihe ziri ezi ma ha anaghị akwụsị ịkwụsị ịkwado ndị okenye, ma ọ dịkarịa ala ndị na-ejikwa sistemụ arụmọrụ nke ha. Na ngwụsị nke ọnwa Nọvemba, anyị na-agwa gị maka ọkwa gọọmentị na Spain ikpeazụ December 1 nke ọhụrụ Samsung Gear S3, ọnụ nke dakwasịrị ahịa na ọrụ ọhụụ yana atụmatụ iji dochie nwanne ya nwoke nke tọrọ, Gear S2. Taa, ụlọ ọrụ Korea amalitela mmelite ọhụrụ maka S2 ebe ha gbakwunyere ụfọdụ ọrụ ndị webatara nke ọma na ihe nlere ahụ abanyela n'ahịa ahụ.
Otu ihe dị ịtụnanya bụ ohere ịnwe ike ịhọrọ mpaghara ndị dị naanị na S3, ihe iji nwee ekele maka ndị ọrụ ahụ niile ike gwụrụ na-emebu. Okpueze na-agbanwe agbanwe, otu n'ime njirimara nke kachasị jide nke ihe nlere a, na nke anyị nwere ike ịnyagharịa site na nhọrọ dị iche iche nke ọnụ, ugbu a ọ na-enyekwa anyị ohere ịza oku, kwụsị ọrụ mkpu ... dabere na ebe anyị gbanyere ya.
Na mgbakwunye, mmelite a na-enyekwa nkwado maka aka aka, ọ bụ ezie na ezi uche dị na ya anyị nwere ike ichefu banyere Spanish ebe Samsung na oge a na-enye ya ohere naanị na Bekee, Korean na Chinese. Ọrụ S-Voice emewokwa ka ọ dị ọhụrụ ikwe ka ịhazi omume site na iwu olu anyị, ihe a tụbara n'ihu ọdụ a.
S Health, ngwa eji ahazi ahụ arụ ọrụ ka ọ dị ugbu a na-achọpụta ngwa ngwa ụdị mmega ahụ anyị na-eme, ihe aghọọla ejiji mgbe a na-agụnye ọla aka yana nke na-enye onye ọrụ ohere ịhapụ igbu oge n'ịchọ ọrụ ọ ga-arụ n'oge ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Samsung Gear S2 emelitere na ụfọdụ atụmatụ nke Gear S3
Android 7.1.1 Nougat bịarutere maka ụfọdụ ngwaọrụ Google
Nhazi nke Ndetu 7 ọzọ na ngosipụta nke nsogbu ya